လ ကြတ်ပြီး ဆေးပေါင်းခတဲ့ည | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Photography » လ ကြတ်ပြီး ဆေးပေါင်းခတဲ့ည
လ ကြတ်ပြီး ဆေးပေါင်းခတဲ့ည
Posted by manawphyulay on Dec 12, 2011 in Photography |9comments
လ စပြီး ကြတ်တုန်း အပြေး ရိုက်လိုက်မိတာပါ
လ နောက်တစ်ချိန်ပြန်ကြတ်နေတုန်း ရိုက်လိုက်တာပါ
အော်……… တို့ မနောဖြူလေး ဘယ်နားအိပ်ပျော်နေတယ် မသိ …။ လကြပ်တဲ့ ပုံတွေ ခုမှ တက်လာတယ်…။ အဲဒါ နတ်ဖွက်ထှာ ဖြစ်မယ်နဲ့ တူရဲ့ …။ အပေါ်ဆုံးနှစ်ပုံက ပန်းချီ ဆန်တယ်နော်…။ အဲဒိလို ပန်းချီကားမျိုးတွေ့ဘူးတယ်…။ ဘယ်မှာလဲ မမှတ်မိလို့………..။
လက်တဲ့စမ်းကြည့်တာ မဆိုဘူး တည့်သားပဲ
ကြယ်တွေ၊ နက္ခတ်တာရာတွေ အားလုံး စုံတဲ့ညကို ဆေးပေါင်းခတဲ့ည လို့ ပြောတာပဲ။ ဆေးပေါင်းခတဲ့ညမှာ ဆေးဖော်ခြင်း၊ မန္တာန်စီရင်ခြင်း စတာတွေ ပြုလုပ်ရင် အောင်မြင်ပေါက်မြောက်နိုင်တယ်လို့ကြားဖူးတယ်။ လပြည့်ချိန်ဟာ စန်းအားကြီးတဲ့ အတွက်ကြောင့် ပီယဆေးဖော်ရင် ဖြစ်နိုင်တယ်တဲ့။ သတင်းကောင်းပြောဦးမှ .. ရွာထဲက နှူးဘာဂိုဏ်းသားတွေစုပြီး ဖော်ထားတဲ့ ပီယဆေးရှိပါတယ်။ လိုချင်သူများ ဆက်သွယ်ပါ။ အစွမ်းထက်ပုံကတော့ နှူးဘားဂိုဏ်း ခေါင်းဆောင် ဂီဂီဆို ကိုယ့်ပုံကို MG မှာတင်ပြီးကြော်ငြာရတဲ့အထိ ဆေးစွမ်းထက်ပါတယ်
ကြယ်တွေ နက္ခတ်တာရာတွေ စုံမှ ဆိုတာ အားလုံး မြင်တာကို ပြောတာလား မြင်မြင် မမြင်မြင် ကောင်းကင်မှာ အစုံထွက်တာကို ပြောတာလား ?
အခု တိမ်တွေ အုံ့ဆိုင်းနေလို့ ဆေးပေါင်း ခ မခ သိချင်လို့ပါ
နောက်ပြီး ဘာကြောင့်များ မယ်ဇလီ တစ်မျိုးထဲမှာ ဆေးပေါင်းက လာ ခ နေတာလဲ?
လနဲ့သစ်ပင် အကြီးအကျယ်အဆက်အစပ်ရှိတယ်လို့တယ်.. သိဖူးတယ်..။
အဲလိုလုပ်ရင်.. လပြည့်ည..လကွယ်ည ခုတ်ထားတဲ့အပင်တွေက.. အရမ်းသိသာတယ်ပြောတယ်..။
သိပ္ပံအရကတော့.. လဆိုတာ ဆွဲလို့.. ဒီရေ(ပင်လယ်ရေကြွတက်)တာတောင်ဖြစ်တာ…
ရှေးခေတ်ဆိုတာ.. သိပ္ပံမဖွံ့ဖြိုးသေးတော့..ဒီလိုပဲ.. နေမကောင်းဖြစ်ရင်.. ထူးဆန်းတာတွေရှာဖွေလိုက်လုပ်ကြည့်ရတယ်မဟုတ်လား..။
ရောဂါတခုခုကို.. မဲဇလီဖူးသုတ်စားပြီးပျောက်တော့… မှတ်တမ်းထားမှာပေါ့..။
အဲ..အဲ.. လကြတ်တယ်ဆိုတာက.. ကမ္ဘာအရိပ်က..လပေါ်ကျတာလို့.. သာမန်အားဖြင့်နားလည်မိတယ်..။
သဂျီးက အခုထက်ထိ ပါဝါ ဆိုတာ လက်မခံဘူး.. ပြီးတော့ အဲဒါ ပါဝါ.. လရဲ့ ဆွဲနိုင်တဲ့ ပါဝါ.. အဲဒါတွေကြောင့် အဲလို အဲလို ဖြစ်လာတာပဲ ဆိုပြီး ပြောနေတယ်.. သဂျီးရဲ့ မသိစိတ်က လက်ခံထားပေမဲ့ အသိစိတ် နဲ့ ငြင်းနေတာ တခါတလေ အသိလွတ်လွတ်သွားတော့ ၀န်ခံပြီးသား ဖြစ်နေပြီ.. ၀န်ခံလိုက်ပါတော့ သဂျီးရယ်.. ဟိဟိ..
နှူးဘာ ဂိုဏ်းသားတွေကတော့ ပါဝါကိုလက်ခံပါတယ်ကွယ်…
ဇီးရိုးလောက်နီးနီး အေးနေတဲ့အချိန်မှာ ည၁၂နာရီလောက်ကြီး
ထွက်ထွက်ပြီး ရိုက်ရတာ ..သူ့ဆွဲအားကြောင့် အသေက်ကလေးတောင်
ထွက်ပီ မှတ်နေတာ ..အဟွတ် အဟွတ်….